Wallagga: Duguuggaa sanyii (genocide) mootummaan lixa oromiyaatti raawwachaa jiru ija siyaasaa qofaan ilaaluun dogoggora - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWallagga: Duguuggaa sanyii (genocide) mootummaan lixa oromiyaatti raawwachaa jiru ija siyaasaa qofaan ilaaluun dogoggora
#Wallagga: Duguuggaa sanyii (genocide) mootummaan lixa oromiyaatti raawwachaa jiru ija siyaasaa qofaan ilaaluun dogoggora
Guyyaatti aanaa tokko qofaa keessatti lubbuu namoota 10–15 dhabamsiisaa jiru ajjeechaan Kun kana qeerroo irratti xiyyeeffateedha. Haadha tokko jalaa ilmoo lama haga sadi’iitu ajjeefama Abbaafi ilma wal biratti ajjeesu kumaatamaan dirqiin nii buqqifamu. Qabeenya uummataatti abiddatu qabsiifama. Guyyaa har’aa qellam wallaggaa aanaa hawwaa galaan qofaa keessatti qeerroo saddet jumalan
Namni hundinuu shakkamaadha shakkamees seeraaf hin dhiyaatu nii ajjeefama
Yakkoota mootummaan kun raawwataa jiru yakkoota suukanneessoo addunyaa kana gubbatti dhala namaa irratti dalgamaa turan irraa adda bifa ittiin ibsinu hin qabnu
Yakkichumatu bifa hin qabu mootummaa hawwaasa nyaatuudha
Filannoo fi farra tokkummaa Oromoo
Akka jedhamutti bara kana filannoon biyyoolessaa ni geggeeffama. Hiree filannoo kanaa fayyadamee gabrummaa waggoota dheeraa jalaa ba’uuf uummanni Oromoo guyyaa eeggachaa jira. Aadaa siyaasa Itoophiyaa keessatti filannoon nagaafi dimokiraatawaa haga ammaatti jiraachuu baates, bara kana dammaqinsaafi qabsoo uummata Oromootiin filannoon kun bu’a qabeessa ta’a jedhee kan yaadu xiqqaa miti. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoos filannoo kanarraa qooda fudhatanii rakkoo uummata Oromoo kana furuuf carraaqaa jiru. Filannoo kanaan carroomanii Oromoo rakkoo jalaa baasuuf akka danda’anitti tokkummaan paartilee siyaasaa Oromoo murteessaa akka ta’e uummanni agarsiisaa jira. Kanuma bu’uura godhachuun paartileen siyaasaa Oromoo sadii (ABO, KFO fi PBO) GAMTAA kan jedhamu uumuun isaanii ni yaadatama. GAMTAAn kun filannoo dhufu milkeessuufi rakkoo filannoon wal qabatee dhufuu malu waliin qolachuufi dura dhaabbachuuf kan uumamedha. Kana malees, Oromoon carraa filannoo kanaan humnoomee mootummaa mataasaa akka ijaarratu hojjechuudha.
Haata’u malee, akka paartileen siyaasaa keenya itti jiraniifi akki itti uummannis hubachiifamaa jiru adda adda. Akka an quba qabutti GAMTAAn kun ammatti beekamtii boordii filannoorraa hin arganne. Akkaataa filannootti dhiyaatan irratti fedhiin paartilee siyaasaa keenya adda adda. Fedhiin isaanii fi gaaffiin isaanii waan lama of keessaa qaba. Innis bakka/godina qooddachuufi bakka hundatti dorgomuudha.
– PBOn Godinoota Arsii fi Baalee qabachuun achi keessatti filatamuu fedha. Kana gochuufis gaaffii dhiyeesseera.
– KFOn Godinoota Giddugalaa keessatti filatamuuf yaada qaba. As keessatti fedhiin Jawar Mohammed godinoota Harargee keessatti KFOn qofti akka filatamuuf fedha.
– ABOn Oromiyaa guutuu golee hunda keessatti falatamuuf hojjechaa jira. Addi Bilisummaa Oromoo akka amantaa qabutti onoota Oromiyaa hunda keessatti filannootti dhiyaatee sagalee argateen mootummaa ijaaruu barbaada. Paartileen kaanis dorgomanii sagalee argatan fudhatanii dhiyaachuun abbaan sagalee caalmaa argate mootummaa ta’ee paartiin kaanis mootummaa ijaaruu keessatti qooda haga sagaleesaa akka qabaatudha fedhiin ABO. Kana jechuun ABOn sagalee caalmaa yoo argate paartileen Oromoo kaanis sagalee argatan qabatanii mootummaa Oromoo ijaaruu keessatti qooda fudhatu. Yoo KFOn ykn PBOn sagalee caalmaa argates paartiin biroo sagalee isaanii qabatanii mootummaa waloo ijaaru jechuudha. Paartileen kun sadan filannoo booda walitti dhufanii mootummaa Oromoo guddicha kan qoqqooddaan homtuu keessatti hin mullanneefi Oromummaan keessaa ifu ijaaru jechuudha.
Kan jiru kana. PBO fi KFOn haala amma deemuun bakka/godina kan qooddatan yoo ta’e egereen tokkummaa uummata keenyaa gaaffii keessa seena. Filannoo qofaaf jedhanii godinoota qooduun kun tarsiimoo mootummaa gabroomfataa galmaan ga’uu yoota’e malee tokkummaa Oromoof gaarii miti. Karaa biroommoo mirga hiree murteeffannaa uummanni keenya argachuu qabu danquudha. Uummata keenya filannoo dhabsiisuu ta’a. Dirqamaan qaama filachuu hin barbaanne filata jechuudha namni. ABOn kutaa Oromiyaa hunda keessatti caasaa qaba. Caasaan dhaaba kanaa waggoota dheeraaf wareegama kaffalaa turee gaafa filannoon dhufus dhaabasaa filachuu qaba. KFOnis akkasuma jechuudha. Falannoonuu yoo jiraate, qoqqooddaan kun tokkummaa uummata keenyaa balaarra buusa. Callisnee ilaaluun cubbuudha.
Biqilaa Amanuu Abbaashomaa tu barreesse
HNN LIVE | Ajjeechaa Wallaggaa fi Gujii Irratti gaggeeyfamaa jiru mormuudhaan Gabaa Lagannaa Baha Oromiyaatti gaggeeyfamaa jiru laalchisee gabaasa-ADDAA.Amajjii 31,2020